Izinhlelo zokuhlanganisa. Ngaphandle kokumiswa okulula, yenza, yenza ukufaka | Kusuka kuLinux
U-Adrián Arroyo Calle | | Ukuhlela, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Konke noma cishe konke (futhi uma ungenayo inhlanhla) kudingeke ukuthi sihlanganise uhlelo kusuka kukhodi yomthombo. Empeleni, kumaphrojekthi amaningi kwanele ukwenza i- ./configure && make && make install ukufaka lolu hlelo, kepha sizobona ezinye izindlela ezihlukile:
1 I-GNU Yenza
2 BSD Yenza
I-GNU Yenza uhlelo lokuhlanganisa olusezingeni eliphansi, zimbalwa izinto ezilungiselelwe futhi akukho zivivinyo ezenziwayo:
I-BSD Yenza enye inguqulo ye-Make njengamanje esetshenziswa yizinhlelo zokusebenza ze-BSD. Ihlukile kwi-GNU Make, ekubeni yi-BSD Make ebanzi kunazo zonke ekusebenzeni yize ingasakazeki kakhulu.
Izici eziningi kune-GNU Make
Akusakazeki emhlabeni we-Linux
I-Autotools uhlelo olusemthethweni lwe-GNU futhi lwakha iskripthi esibizwa ngokuthi yi-configure okufanele sisishayele ukukhiqiza i-GNU Make Makefile ehambisanayo. Kusetshenziswa kabanzi, kepha abantu abaningi ngokwengeziwe (nami ngokwami) bacabanga ukuthi bunzima kakhulu, bunzima, buhamba kancane futhi abuhambisani kakhulu.
Ukuphatheka okuncane phakathi kwezinhlelo ze-Non-UNIX
Yenza izivivinyo eziningi kakhulu (hlola KONKE, futhi KONKE KUKHO KONKE)
Ihamba kancane kakhulu lapho isethwa
Ukusebenzisana okubi emuva
(Isistimu engiyithandayo) I-CMake uhlelo oluzokwenzelela ukushiyeka kwama-Autotools ezicini eziningi, njengokuhambisana kwaso emuva nokubabazeka. Futhi ukwenza ngcono uhlelo lokuhlola olulungiswa kakhulu ngezidingo zephrojekthi ngayinye. Iqiniso ukuthi amaphrojekthi amaningi andayo asebenzisa i-CMake efana ne-KDE, PortAudio, Ogre3D, njll. Singabona lolu hlobo lohlelo sibonga kufayela le-CMakeLists.txt elizokhiqiza i-Makefile noma iphrojekthi ye-Eclipse noma i-CodeBlocks
Ukuxhaswa okuhle kwepulatifomu
Ungachaza izivivinyo ngendlela enziwa ngezifiso kakhulu
Kunzima ukuqonda ekuqaleni
Kufanele usebenze ngokukhipha okungasabisa ekuqaleni
Ukusabalala okuncane yize kukhula kancane kancane
I-QMake uhlelo olwakhiwe yiTrolltech lokuhlanganisa amaphrojekthi enziwe kuQt. Ngale ndlela i-qmake igcizelela kakhulu i-Qt futhi imvamisa ifomethi esetshenziswa ngama-IDE anjenge-QtCreator. Kuyaziwa kakhulu kumaphrojekthi we-Qt kepha akutholakali ngaphandle kwale ndawo:
Ihlanganiswe kahle kakhulu neQt
Iplatifomu enhle ngaphakathi kweQt
Okuvamile ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza ze-Qt
Ama-SCons uhlelo olususelwa kuPython lokuhlanganisa amaphrojekthi we-C / C ++. Ngokungafani ne-Autotools, i-CMake noma i-QMake; Ama-SCons awakhi iMakefile. Ama-SCons aguquka kakhulu kepha mhlawumbe ahamba kancane ekusebenzeni okulula
Thatha ukuhlolwa okulungile
I-Boost.Jam inguqulo yePerforce Jam esetshenziswa kwimitapo yolwazi eyaziwayo ye-C ++ Boost, yize uhlelo lokuhlanganisa lungasetshenziswa ngokwehlukile. Ngokungafani ne-GNU Make, Boost.Jam isebenzisa ama-Jamfiles, okuyinguqulo ethuthukisiwe yama-Makefiles. Zithandwa kakhulu kwimvelo ye-BeOS / Zeta / Haiku.
Okufushane kakhulu ukubhala
Kunzima ukwenza izivivinyo
I-Ninja uhlelo olwenziwe i-Google ukuhlinzeka ngohlelo lwe-ultra-fast build ekuqaleni olwenzelwe ukuthi lube lwephrojekthi yeChromium. INinja ayakhelwanga ukuthi kube lula ukuyiguqula, ngokusho kwababhali bayo uhlelo olwenza iNinja kumele lutholakale. Kunconywe i-CMake ne-gyp.
Udinga olunye uhlelo lokuzala iNinja
Ungasebenzisa noma yiluphi olunye uhlelo olufana nolwakho u-bash noma umbhalo we-python. Kukhona nama-generator ezinye izilimi ezingezona ezomdabu ezingasetshenziswa njengeGradle, Maven, gyp, njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » Izinhlelo zokuhlanganisa. Ngaphandle kokumiswa okulula, yenza, yenza ukufaka
I-Make akuyona uhlelo lokuhlanganiswa, i-generator yamabhanari (noma amatshe) avela kukhodi yayo yomthombo. Ingasetshenziswa futhi njengomgijimi womsebenzi.
Ngiyahluka kuwe ukuthi ukwenziwa kwe-BSD kubanzi ekusebenzeni, ukwenziwa kwe-GNU kuphelele ngokwengeziwe, kunokusebenza okuningi. Futhi lokhu ngikusho ngokuhlangenwe nakho kwami, ku-BSD njalo kufanele ngifake i-GNU make ngoba ukwenziwa kwe-BSD kulula kakhulu uma kuqhathaniswa nokwenziwa kwe-GNU.
Ngiyavumelana nawe ukuthi i-Autotools inzima kakhulu, ngincamela ukusebenzisa iMakefile nje. Amafayili enziwe akhiqizwa ama-Autotools kunzima ukulungisa iphutha.
Ngokubona kwami ​​i-GNU make bekulokhu kungokwesiko kakhulu futhi kuthembekile kuhlelo lokwakha lwangempela futhi ukwenziwa kwe-BSD bekuhlale kunokwakhiwa okusha kepha kungenzeka ukuthi ngiye ngabona ezinye izinto lapho ngiqhathanisa.
Ama-Autotools impela ikhanda elikhulu. Njengomhlanganyeli ohlelweni olusebenzayo lwe-Haiku kuye kwadingeka ngithumele isoftware ngama-autotools futhi isihogo. Kunamacala ambalwa lapho ngigcine ngakha iMakefile noma iCMakeLists.txt ngaphambi kokulungisa lokhu kungcola.
Njengamanje ngisebenzisa iPremake4, okulungisekayo kakhulu futhi okulula okususelwa kumibhalo yeLua. Bheka uma ungayazi.
Siyakuhalalisela ngendatshana, elula futhi emfushane, inkomba enhle kakhulu.
'yenza isheke' isetshenziselwa ukubheka ukuhlanganiswa ngemuva kokusebenzisa ukwakheka
[ICEBISO] Shintsha phakathi kwesikrini esisha se-Unity ne-LightDM ku-Ubuntu 14.04